Raharaham-pirenena : hiantsa an-dalambe ny mpanoratra | NewsMada
Raharaham-pirenena : hiantsa an-dalambe ny mpanoratra
Par Taratra sur 28/07/2016
« Hanao ny akanjon’ny mpitory Vaovao Mahafaly izahay », hoy i Avelo-Nidor, tompon-kevitra amin’ilay antsa tononkalo an-dalambe hotanterahin’ny mpanoratra eto an-dRenivohitra ny 30 jolay izao. Manerana ny fiantsonan’ny taxi-be eo Ambohijatovo, Analakely mipaka hatrany amin’ny zaridainan’Antaninarenina, handrenesana ny feon’ny mpanoratra, hiresaka ny raharaham-pirenena amin’ny alalan’ny asa sorany.
« Efa maro no niteny fa mba anjaranay indray izao no hampatsiahy fa misy mpanara-maso ny zava-misy eto amin’ny firenena. Anisan’izany ny mpanoratra. Tsy hampiriminay any am-batasarihina fotsiny ireny sanganasa ireny fa mila havoaka ho arofanina », hoy ihany ity tanora mpanoratra ity.
Nomarihiny fa tsy famoriana olona hihaino tononkalo no hatao fa fiantsana tononkalo ho an’ireo mpiandry taxi-be sy izay ao anaty fiara tratry ny fitohanan’ny fifamoivoizana. Hanatanteraka ity antsa an-dalambe ity ireo mpanoratra 10 mianadahy mahery. Ho avy hanotrona ihany koa ireo mpanoratra nasain’i Avelo-Nidor.